China Popular Type Disc Type Jet Mill ụlọ ọrụ na-emepụta | Qiangdi
Etgbọ mmiri Jet Mill-bed
QDF-400 WP n'ihu Production System Of Jet Mill N'ihi 400kg
Jet Mill WP System – Tinye na Ubi Agrochemical
WP-WDG Sistemụ - Na-etinye Uzo Agrochemical
Popular ụdị Fluidized-bed Jet Mill
Pụrụ Iche Nke Fluidized-akwa Jet Mill Na High ekweghị ekwe Materials
Battery Industry na ndị ọzọ Chemical Ihe Jiri Fluidized-bed Jet Mill
Nitrogen Protection Jet Mill System Maka Ihe Pụrụ Iche
High ekweghị ekwe Akụrụngwa Jet Mill
Dị Disc (UltrasonicPancake) Jet Mill
Laboratory Jiri Jet Mill
-Lọ nyocha na-eji akwa akwa Jet Mill maka 1-10kg ikike
-Lọ nyocha Lab-eji igwe ihe eji egwu mmiri QDB-50 QDB-100 QDB-150
Jet Micron Grader Maka Nhazi
Akụrụngwa Maka Jet Mill
Akụrụngwa Maka Jet Mil
LSM Vetikal Wet Stirring Mill
Njikọ Injinia metụtara
Uru anyị na mgbe Ahịa
Panorama .lọ ọrụ
Dị Disc (Ultrasonic / Pancake) Jet Mill. Opekpụrụ Ọrụ: Site na ikuku ikuku site na inye nri injectors material ihe akụrụngwa na-ebuwanye ọsọ gaa na ultrasonic ọsọ ma gbanye ya n'ime ụlọ milling na ntuziaka dị mkpa, na-agbakọta ma na-egweri na irighiri.
Dị Disc (Ultrasonic / Pancake) Jet Mill. Opekpụrụ Ọrụ: Site na ikuku ikuku site na inye nri injectors material ihe akụrụngwa na-ebuwanye ọsọ gaa na ultrasonic ọsọ ma gbanye ya n'ime ụlọ milling na ntuziaka dị mkpa, na-agbakọta ma na-egweri na irighiri. Na urughuru size nwere ike na-achịkwa site ukpụhọde longitudinal omimi, -egwe ọka nsogbu na ihe onwunwe nri ọsọ. Cdị Jet Mill na-arụ ọrụ dị mma maka ihe ndị na-adọrọ adọrọ.
1 .Adabara maka akọrọ-ụdị superfine usoro, kasị enwe mmetụta ọsọ ọsọ ruo 2.5 March na-ejikarị 1-10um grains.you ike Mike ọtụtụ ugboro iru ngwaahịa 'size.
2. Omume dị mma na ihe gummy, viscosity, ekweghị ekwe na eriri na-enweghị mgbochi ọ bụla.
3. Enweghị ọnọdụ ịrị elu, kwesịrị ekwesị maka ihe na-agbaze ala na ihe na-ekpo ọkụ.
4. Uru: imewe dị mfe, dị ọcha na ndozi, obere mkpọtụ, enweghị vibration. Akụrụngwa a nwere ike ịkụchasị ike na ike oriri.
5. Ọ nwere mmetụta dị mma nke pulverization na ihe ọ bụla, karịsịa dabara na ahịhịa ndị China na ọgwụ ndị China.
6. Igwe a dị nkenke na nhazi, dị mfe ịrụ ọrụ, ma dị mfe ịwụnye ma gbasasịa.
7. Inyocha Injinia na-eyi arụ, na-eguzogide corrosion, ogologo ndụ, ma ghara ibibi ihe.
Chart Chart Of Fluidized-bed Jet Mill
The igba eserese bụ ọkọlọtọ-egwe ọka nhazi ， na ike ga-gbanwee maka ndị ahịa.
PLC Control usoro
Usoro a na - ejide njikwa ihuenyo mmetụ ọgụgụ isi, ọrụ dị mfe na njikwa ziri ezi.
A na-etinye ya n'ọrụ na igwe nri nri na mpaghara ndị dị ka pesticide, kemịkal kemịkal na ụlọ ọrụ ọgwụ. Maka carbendazim. rasmi topsin, herbicide, silica aero gel, ink e ji esiji ákwà na cortisone.
Ike （kg / h)
Nri ikuku (m / min)
Nrụgide Ọrụ (Mpa)
Ike oriri ike
Nlereanya Ngwa Ngwa
Kunshan Qiangdi egweri Equipment Co., Ltd bụ ọkachamara elu-tech enterprise aku uzuzu akụrụngwa R&D, n'ichepụta na ahịa. Kedu mpaghara dị na Jiangnan mmiri mmiri-Youde Road, Mpaghara Teknụzụ, Kunshan City, Jiangsu Province. Anyị ji obi anyị niile na-efe ndị ahịa anyị mgbe niile. na-esi ọnwụ na ụkpụrụ "Quality mbụ, -agba mbọ maka ọhụrụ na mmepe" na-enye n'ozuzu ngwọta maka anyị àgwà ahịa.
E wezụga nke ahụ, anyị agafeela nyocha njirimara nke ụlọ ọrụ ISO9001: 2008.
Anyị nwere ọtụtụ teknụzụ nyocha na ndị injinia mmepe nwere ihe karịrị afọ iri abụọ na ahụmịhe ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ, Dịka ụlọ ọrụ nkeonwe, anyị nwekwara uru mgbanwe na nrụpụta mmepụta, teknụzụ Innovation, mmepụta na nnyefe oge, ọkachasị njikwa ọrụ njikwa. Ugbu a, anyị na-elekwasị anya na mmepe na mmepụta nke ihe ntụ ntụ dị elu, ngwaahịa ndị bụ isi gụnyere igwe ihe eji akwa akwa, ihe ndozi ụdị jet jet, jet ultrafine pulverizer, ikuku ikuku, ọgwụ na nri nri jet dị n'okpuru GMP / FDA chọrọ , ọgụgụ isi gburugburu ebe obibi pesticides egweri & inggwakọta usoro na ọgụgụ isi gbawara-àmà ugboelu pulverizing usoro na na. ma anyị na-apt ịmụta ndị ahịa nke mere na anyị nwere ike inye ha mma ọrụ na ihe ngwọta.
Anyị na-ebupụ ngwaahịa anyị na ụwa niile: America, Europe, Australia, Africa na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, dịka Germany, Pakistan, Korea, Vietnam, India, Italy, Burma wdg. N'ihi ntụkwasị obi nke ndị ahịa anyị na mgbalị anyị, azụmahịa QiangDi na-agbasawanye nke ukwuu n'afọ ndị gara aga.
Mana anyị anaghị akwụsị ịgbalị ịka mma ma anyị ji obi anyị niile chọọ ịkekọrịta azụmaahịa a na-ekwe nkwa na ndị mmekọ azụmaahịa niile na mmeri abụọ.
1. Mee ezigbo ngwọta na okirikiri nhọrọ ukwuu dị ka ndị ahịa akụrụngwa na ikike na-arịọ.
2. Mee ntinye akwụkwọ maka mbupu site na ụlọ ọrụ Kunshan Qiangdi gaa ụlọ ọrụ ndị ahịa.
3. Nye echichi na nyere, ọzụzụ na-na saịtị maka ahịa.
4. Na-enye ndị ahịa akwụkwọ ntuziaka Bekee maka igwe igwe niile.
5. Akụrụngwa akụrụngwa na ndụ ogologo oge ọrụ ahịa.
6. Anyị nwere ike ịnwale ihe gị na akụrụngwa anyị n'efu.
Mee ka ezigbo onye ndụmọdụ na onye inyeaka nke ndị ahịa iji mee ka ha nwee ọgaranya na nloghachi nloghachi na ntinye ego ha.
1. Webata ngwa ahịa onye ahịa ahụ n’ụzọ zuru ezu, zaa ajụjụ ndị ahịa ahụ jiri nlezianya welite;
2. Mee atụmatụ maka nhọrọ dịka mkpa na mkpa pụrụ iche nke ndị ọrụ na mpaghara dị iche iche si dị;
3. Nlele nlele nlele.
4. Lelee ụlọ ọrụ anyị.
1. Gbaa mbọ hụ na ngwaahịa nwere oke mma na ntinye ọrụ tupu nnyefe;
2. Napụta oge;
3. Nye akwụkwọ zuru ezu dị ka ihe ndị ahịa chọrọ.
Nye ọrụ nlebara anya iji belata nchegbu nke ndị ahịa.
1. Ndị injinia dị maka igwe ọrụ na mba ofesi.
2. Nye 12 ọnwa akwụkwọ ikike mgbe ngwongwo na-abata.
3. Nyere ndị ahịa aka ịkwadebe maka atụmatụ iwu ụlọ nke mbụ;
4. Wụnye ma wepu akụrụngwa ahụ;
5. Zụọ ndị na-arụ ọrụ mbụ;
6. Nyochaa akụrụngwa;
7. Mee ngwa iji kpochapụ nsogbu ndị ahụ ngwa ngwa;
8. Nye nkwado oru;
9. Estmepụta mmekọrịta dịte aka na nke enyi.
1.Q: Olee otu m ga - esi tụkwasị obi na ogo gị?
1). All nke igwe na-anwale ọma na QiangDi omumuihe tupu Mbupu.
2). Anyị na-enye otu afọ akwụkwọ ikike niile akụrụngwa na ndụ mgbe-sales ọrụ.
3). Anyị nwere ike ịnwale ihe gị na akụrụngwa anyị tupu itinye iwu, iji hụ na akụrụngwa anyị dabara maka ọrụ gị.
4). Ndị injinia anyị ga-aga ụlọ ọrụ gị iji wụnye ma mezie akụrụngwa ahụ, ha agaghị alaghachi ruo mgbe akụrụngwa a ga-ewepụta ngwaahịa ruru eru.
2. Q: Gini bu ichoro gi ma i jiri ndi oru ndi ozo?
1). Anyị ọkachamara injinia nwere ike ime ka ihe ndị kasị adabara ngwọta dabere na gị iche iche nke ngwaọrụ, ikike na ndị ọzọ chọrọ.
2). Qiangdi nwere ọtụtụ teknụzụ nyocha na injinia mmepe nwere ihe karịrị afọ 20, ahụ ike R&D siri ike, ọ nwere ike ịzụlite teknụzụ ọhụrụ 5-10 kwa afọ.
3). Anyị nwere ọtụtụ ndị ahịa buru ibu na Agrochemical, Ihe ọhụrụ, Ọgwụ ọgwụ n'ụwa niile ,.
3. Q: Kedu ọrụ anyị nwere ike ịnye maka ntinye igwe na nnwale ule? Gịnị bụ anyị akwụkwọ ikike amụma?
Azịza: Anyị na-eziga ndị injinia na saịtị ndị ọrụ nke ndị ahịa ma na-enye ntụziaka ntanetị na nlekọta na saịtị n'oge ntinye igwe, inye ọrụ na ịnwale ule. Anyị na-enye akwụkwọ ikike nke ọnwa 12 mgbe echichi ma ọ bụ ọnwa 18 mgbe nnyefe ahụ.
- Anyị na-enye ọrụ ụbọchị niile maka ngwaahịa igwe anyị mgbe nnyefe ahụ gasịrị, ma soro ndị ahịa anyị ga-agbaso ọnọdụ igwe ahụ mgbe nrụnye igwe na-aga nke ọma na ụlọ ọrụ ndị ahịa anyị.
4. Ajụjụ: Otu esi azụ ndị ọrụ anyị gbasara ọrụ na ndozi?
Azịza: Anyị ga-enye nkọwa zuru ezu na teknụzụ na-akụzi ihe iji kụziere ha maka ịrụ ọrụ na ndozi. Na mgbakwunye, ndị injinia anyị maka nzukọ ndu ga-akuziri ndị ọrụ gị na saịtị.
5. Q: Kedu usoro mbupu ị na-enye?
Azịza: Anyị nwere ike ịnye FOB, CIF, CFR wdg dabere na arịrịọ gị.
6. Q: Kedu usoro ịkwụ ụgwọ ị na-ewere?
Azịza: T / T, LC na anya wdg.
7. Ebee ka ụlọ ọrụ gị dị? Kedu ka m ga-esi gaa ebe ahụ?
Azịza: companylọ ọrụ anyị dị na Kunshan obodo, Jiangsu Province, China, ọ bụ obodo kacha nso na Shanghai. Nwere ike ịga efe na ọdụ ụgbọ elu Shanghai ozugbo. Anyị nwere ike ịtụtụrụ gị n’ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ ọdụ ụgbọ oloko wdg.
Nke gara aga: WP-WDG Sistemụ - Na-etinye Uzo Agrochemical
Osote: GMP FDA Fluidized-bed Jet Mill
Mba 318, Youde Road, Mpaghara Ulo Ozo, Kunshan City, Jiangsu, China
WhatsApp / WeChat / Ekwentị: